Vehivavy mpandraharaha namaky ny sakana tao Kashmir · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy mpandraharaha namaky ny sakana tao Kashmir
MpanoratraGV South Asia
Voadika ny 14 Desambra 2018 7:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, اردو, Italiano, Español, Română , Ελληνικά, عربي, bahasa Indonesia, 日本語, English
Mufti Sadia ao amin'ny toeram-pivarotany. Sary nahazoana alalana.
Matetika mankany amin'ny fiainana sy fihariana mihitsoka ny fanakatonana sy ny tsy fahazoana mivezivezy an-dalambe (amin'ny alina) mpitranga ao Jammu sy Kashmir eo ambany fitantanana Indiana. Mety hitera-boina ho an'ny rehetra ny fananganana fihariana vaovao saingy mety hitombo avo folo heny ny sakana ho an'ny vehivavy izay tsy maintsy miady amin'ny lasitra ara-tsosialy momba ny anjara toeran'izy ireo eo amin'ny toeram-piasana. Na eo aza izany, misy ireo andiam-behivavy indraimihira izay mamaky ny sakana ary manangana ny fihariany manokana.
Nanomboka ny fihariany i Mufti Sadia raha tsy mbola nisy vehivavy teo amin'ny sehatry ny fampiakanjoana tao Kashmir. Anisan'ny voalohany niorina tao Srinagar ny botikany rehefa nanapa-kevitra nyhiala tamin'ny asany teo aloha izy ary hiasa mahaleotena ao amin'ny lemaka.
Teo am-piatrehana fahasarotana sy fanamby maro i Sadia no nanomboka ny marika manokana antsoina hoe ‘Hangers, the closet‘ tamin'ny taona 2014 tao amin'ny tsenambarotra iray. Na dia teo aza ny fanehoan-kevitra miiba maro dia tsy nampihemotra azy velively izany:
Mufti Sadia,24,has started her own women's boutique,Hangers The Closet,in #Srinagar.only female shop owner at the Sarah City Centre #Kashmir pic.twitter.com/OVeDIXZw1Y
— Younis Rah (@YounisRah) January 28, 2017
Nanomboka ny botika ho an'ny vehivavy Hangers The Closet tao Srinagar, toeram-pivarotana tokana izay vehivavy ny tompony tao amin'ny Sarah City Centre i Mufti Sadia, 24 taona
“Tsy nahazo antoka loatra ny raiko tamin'izay nataoko satria vao 24 taona monja aho tamin'izany fotoana izany, saingy efa manohana ahy izy ankehitriny amin'izay ataoko,” hoy i Sadia raha teo am-piatrehana mpanjifa iray.
Loharanon'aingam-panahy ny fianakaviany ho an'i Sadia, tamin'ny fanampiany hatrany amin'ny fahasarotana atrehina amin'ny maha-mpandraharaha vaovao sy vehivavy azy eo amin'ny fanjakana mora mikopak'elatra. Efa fanta-daza ankehitriny ny Hangers eto amin'ny faritr'i Kashmir.
Azon'i Sadia amin'ny alalan'ny Instagram sy Facebook ny ankamaroan'ny mpanjifany. Ny ankamaroan'ny bikan'ny fitafiany dia natao hampisy marika tandrefana amin'ny fitafy nentim-paharazana Kashmirita. Raha niainga tamin'ny tsy misy izy dia nitatra ka mampiasa tovovavy mpivarotra ankoatra ny iraika ambin'ny folo hafa.
“Tsara ny valiny hatramin'izao, nahazo fanehoan-kevitra miiba aho tao amin'ny media sosialy, ary misy mihitsy ny avy amin'ny vehivavy amin'izany, saingy mihevitra aho fa natao hampitombo ahy ho olona tsaratsara kokoa mankany amin'ny mpandravaka sy mpanaingo tsaratsara kokoa ny fanehoan-kevitra miiba,” hoy i Sadia nanampy.
Raha nahatonga aingam-panahy tamin'ny zatovovavy maro hanangana ny sehatra fampiakanjoana i Saida, dia misy vehivavy iray hafa ao amin'ny tanàna taloha an'i Srinagar izay nahavotra ny fianakaviany teo ambavahaonan'ny mahabankirompitra ny haranitsa-tsainy teo amin'ny sehatry ny fihariana.
Rifat Masoodi. Sary nahazoana alalana.
Reny manan-janaka roa i Rifat Masoodi ary nihevitra ny hanakatona ny orinasa fanamboarana kibay fivelesam-baolina (cricket) miorina ao amin'ny sehatra mora miova ao Srinagar ny fianakaviana fony maty ny rafozan-dahiny.
Tamin'ny fisedrana ny karazan-javatra rehetra mety hihatra, nandresy lahatra ny vadiny i Rifat hamela azy hitantana ny orinasa izay mampiasa olona maromaro ao an-toerana. Na dia teo aza ny fihetsika [sakanna] ara-tsosialy, dia nanangana ny fanamby izy tamin'ny taona 2000:
EXC: Tucked inside Srinagar’s Downtown, that remains nervecentre of protests b/w military & civilians, Rifat Masoodi is quietly scripting a story of grit
The only woman in Kashmir who runs a bat factory appeals “Its time @imVkohli @msdhoni @ImRo45 bought bats from us”
I report pic.twitter.com/8Up2mxOnL5
— Rohan Dua (@rohanduaTOI) October 3, 2018
[Vaovao tsy misy mpanana]: Miforitra ao afovoan-tanànan'i Srinagar, izay mbola mitoetra ho ivon'ny fihetsiketseham-panoherana [ifanandrinan'ny] miaramila sy ny sivily. Manoritra tantara am-pahanginana eo amin'ny vato.
Miantso ilay vehivavy tokana ao Kashmir mamelona orinasa fanamboarana kibaim-baolina “fotoana izao ividianan'i @imVkohli @msdhoni @ImRo45 kibaim-baolina avy aty aminay”
Isa-maraina rehefa avy mandefa ny zanany ho any an-tsekoly, dia mijanona eo amin'ny toerana kely fanaovan-draharaha akaikin'ny tranony izy hijery ny fizotran'ny asa. Mamokatra kibay an'arivony isam-bolana izay taterina mankany amin'ny fanjakana hafa, ahitana an'i Maharashtra and Kerala, ny orinasan'i Rifat.
“Sarotra ny mitantana ny zava-drehetra. Amin'ny maraina aho manao ny asako ao an-trano, avy eo aho mankao amin'ity toerana fanaovan-draharaha ity. Rehefa elaela, rehefa tonga ny ankizy amin'ny efatra ora hariva dia mandeha aho hijery azy ireo. Mikarakara ny rafozam-baviko ihany koa aho,” hoy i Rifat.
Vao haingana izay ny vehivavy Kashmirita maromaro no nahomby teo amin'ny sehatry ny fihariana ao amin'ny fiaraha-monina mpandala ny nentin-drazana. Maro amin'izy ireny ankehitriny no manatontosa amim-pahasahiana ny nofinofiny.
Orinasam-panaovana kibaimbaolina an'i Rifat Masoodi. Sary nahazoana alalana.
Maniry ankehitriny i Rifat ny hahita ny kibainy eny an-tanan'ireo mpilalao eo amin'ny firenena sy iraisampirenena. Lasa aingam-panahy ho an'ny maro amin'ny vehivavy hafa ao amin'ny fanjakana manofinofy hanomboka ny fihariany manokana ireo mpandraharaha ireo.
Mpandray anjara Kashmirita tsy te-hanonona anarana no nanao ny lahatsoratra.
Nepal 3 andro izay